गोपीकृष्णको मनोमानी हलबाट निस्कियो 'राम कहानी' , यस्तो छ कारण ! – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsKollywoodगोपीकृष्णको मनोमानी हलबाट निस्कियो ‘राम कहानी’ , यस्तो छ कारण !
गोपीकृष्णको मनोमानी हलबाट निस्कियो ‘राम कहानी’ , यस्तो छ कारण !
भदौ २२ अर्थात भोलिबाट देशव्यापी प्रर्दशनमा आउने फिल्म ‘राम कहानी’ राजधानीका दर्शकको मुख्य केन्द्र मानिने चाबहिल स्थित 6रहेको गोपिकृष्ण हलमा रिलिज नहुने भएको छ । पर्दा बाँडफाँडको बिषयमा कुरा नमिलेपछि फिल्म निर्माण टिमले गोपिकृष्णका कुनै पनि पर्दामा आफ्नो फिल्म नलगाउने घोषणा गरेको हो ।
फिल्मका निर्देशक सुदर्शन थापाका अनुसार ,फिल्मको प्रर्दशन नजिकु अघि फिल्मलै ठुलो हल दिने सहमति भएको थियो तर आज अर्थात् फिल्म प्रर्दशनमा आउनु भन्दा केहि समय अगाडी सो फिल्मलाई सानो हल मात्र दिने हलका संचालकले बताए पछि फिल्म निर्माण टिमले आफ्नो फिल्मलाई गोपी कृष्णबाट निकालेको हो । उनका अनुसार, गोपीकृष्णकै फिल्म रोज पनि भोलिबाटै प्रर्दशनमा आउने भएकाले हलले आफ्नो फिल्म प्रति दर्शक तान्नका लागि यसो गरेको हो । अर्थात सानो हल थोरै दर्शक र शो टिकट नपाए पछी सोत दर्शक रोज तिर तानिने भएकालले गोपीकृष्णले यो फन्डा अपनाएको उनको भनाई रहेको छ ।
फिल्म हेर्न दर्शक कम हुँदा र अन्य प्रतिस्पर्धी फिल्ममा बढि दर्शक पाउँदा मात्रै ठुलो पर्दाबाट सानो पर्दामा फिल्म हलले ‘सिफ्ट’ गर्दैआएको छ । तर आफ्नो फिल्म रिलिज भएकै कारण गोपिकृष्णले ‘रामकहानी’का दर्शकलाई अन्याय गरेको वितरण टिमका एक सदस्यले बताएका छन् । फिल्म नलाग्दै सानो पर्दा दिनेहलवालाको निर्णय र उक्त हलबाटै फिल्म उतार्ने निर्माण टिमको निर्णयले ब्यापारिक घाटादुबै पक्षलाई हुनेछ । फिल्म प्रर्दशन मिति नजिकिए संगै फिल्म निर्माण टिमले प्रचारप्रसारलाई निकै बृहत बनाएको छ ।